Home Wararka “Daawo” Kiiskii Ikraan Tahliil oo daaqada laga Tuuray & Rooble oo...
[Deg Deg] “Daawo” Kiiskii Ikraan Tahliil oo daaqada laga Tuuray & Rooble oo lacag iyo jagooyin ku bedeshay
Xeer ilaaliyaha guud ee Maxkamadda Ciidamada qalabka sida Gen Cabdullaahi Buule Kameey ayaa sheegay in hogaanka NISA lagu Waayay wax caddayn ah oo muujinaya ku lug lahaanshaha Kiiska Ikraam Tahliil.
Gen, ayaa sheegay in hay’adda NISA ay si hufan ula shaqeeyeen inta ay wadeen baarista Kiiska Ikraan Tahliil.
Gen Kameey ayaa sheegay in ay caddaymo ka qoreen ku simaha NISa Gaashaanle Sare Yaasiin Fareey iyo Madaxii hore ee NISA Fahad Yaasiin.
Generaal kan, ayaa ku jiray laba guddi oo xilligii khilafka uu ka dhax jiray Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ay kala magacaabeen.
Waxa uu intaas ku daray in baaris lagu sameeyey Taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, ku-simaha Taliyaha NISA Gaashaanle Sare Yaasiin Cabdullaahi Fareey iyo Cabdilaahi Kulane, oo horey uga tirsanaa hay’adda
Xubnaha la baaray ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah sarkaal lagu magacaabo Cabdiqani Wadna Qabad iyo sarkaalad magaceeda lagu sheegay Asma Yuusuf Cumar.
Jenraal Cabdullaahi Kameey ayaa sheegay in natiijadooda ay kasoo baxday.
In NISA ay si hufan ula shaqeysay guddiga baarayey kiiska iyo xafiiska xeer-ilaalinta.
Inta baarista lagu guddi jiray guddi uma soo bixin wax caddeyn ah oo muujinaya in sarkaalad ku maqan tahay gacanta NISA.
Guddiga waxuu la wareegay gal baariseedka NISA ee sheegaya in Ikraan ay dileen Al-Shabaab.
Guddiga ayaa sheegay in kiiska lagu soo xiray in la codsaday in cid kastaa oo warbixin ka heysa ay lasoo xiriiraan haya’adaha dambi baarista.